कहाँबाट शुरु गर्ने समृद्धिको यात्रा ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / कहाँबाट शुरु गर्ने समृद्धिको यात्रा ?
कहाँबाट शुरु गर्ने समृद्धिको यात्रा ?
Posted by: युगबोध in विचार May 15, 2018	0 38 Views
नेपाल र ने पालीको समृद्धिको चर्चा नगरी सायद कुनै ने ताको भाषण पूरा हुदै न । कुनै कार्यक्रममा बोल्दा होस् वा कार्यक्रम बनाउदा समृद्धि जो डिएकै हुनुपर्छ भन्ने भान पर्न गएको छ । किनकि दे शका प्रधानमन्त्री के पी ओ लीले मुलुकले अब समृद्धिको यात्रा शुरु गरे को छ र यसलाई पूरा गर्नु सबै को कर्तव्य हो भन्नुभएको छ ।
कतिपयलाई लाग्नसक्छ दे शमा विकासका ठूला–ठूला यो जनाको निर्माण कार्य पूरा भएपछि समृद्धि हासिल हुन्छ । त्यसै ले विकासका ठूला–ठूला काम गर्नुपर्छ जस् तै धे रै मे घावाटका हाइड्रो प्रो जे क्ट, पूर्वपश्चिम रे ल, चीन भारत जो ड्ने सडक, पूर्व–पश्चिम जो डने चौ डा सडक, सुरुङ मार्ग, मे ट्रो रे ल, धे रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धे रै ले रो जगारी पाउने ठूला–ठूला कारखाना, ठूला सिंचाई यो जना आदि आदि । यी र यस् ता निर्माण पनि आवश्यक छन् तर समृद्धि यतिले मात्रै आउ“दै न भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने मे रो बुझाइ हो  । यी र यस् ता ठूला आयो जना निर्माण गर्दा हाम्रो आफ्नो सामथ्र्य र आवश्यकता अनुकूल भएन भने मुलुकले फाइदा पाउनुको सट्टा उल्टै नो क्सानी नहो ला भन्न सकिदै न । त्यसै ले निकै हो शियार भएर मात्रै यस् ता आयो जनाको शुरुवात गर्नुपर्छ । दे शले खो जे को समृद्धि भने को सबै का लागि समृद्धि हो  । सीमित मानिसले मात्रै फाइदा पाउने समृद्धिले मुलुकको सूचाङ्कमा त के ही परिवर्तन हो ला तर दिगो शान्ति प्राप्त हुन सक्दै न । ठूला–ठूला आयो जना सञ्चालन गर्दा अहिले मौ लाउदै गरे को ‘क्रो नि क्यापिटलिजम’ले प्रश्रय पाउनुहुदै न बरु भएका पनि दण्डित हुनुपर्छ । क्रो नि क्यापिटलिजमका स्रो तहरु राज्य सत्ताको नजिकमा रहने कतिपय राजनीतिक ने ताजस् ता दे खिने अराजनीतिक मानिस र राष्ट्रसे वक जस् ता दे खिने उपल्लो तहमा बसे का गै रव्यावसायिक मानिसलाई निरुत्साहित गनै र् पर्छ । यसका लागि राजनीतिको मूल ने तृत्व कठो र बन्नै पर्छ ।
अहिले समृद्धिको शुरुवात गर्न कुनै नया“ र ठूला–ठूला काम गर्नुभन्दा पहिला हामीले गदै र् गरे का कामहरुलाई व्यवस् ि थत बनाउन जरुरी छ । हामी भित्रका समस् याहरुको पहिचान गरे र तिनलाई सुधार गर्नुपर्छ । जस् तै ः बजे ट बन्छ खर्च हु“दै न । खर्च हुन्छ फछ्यो र् ट ह“ुदै न । काम शुरु हुन नै समस् याको चाङ लाग्छ । बल्ल–बल्ल काम शुरु हुन्छ समयमा सकिदै न किन ? हुनुपने र् काम हु‘“दै न र त्यसको जिम्मे वारी पनि कसै ले लिदै नन् । कसै ले सो धिहाले छन् भने पनि अरुलाई दो ष दिने बाहे क अरु काम हु“दै न । कमिशनका लागि मात्र काम गने र् प्रबृत्ति हावी छ ।
आपूmले कमिशन पाएपछि गरे को कामले के नतिजा दियो भने र खो ज्ने गरिदै न । राज्यको पै सा सबै तिर बगे को छ । कसै लाई मतलब छै न । सरकारको काम कहिले जाला घाम यो उखान पुरानो हुन सके को छै न । अझ एघार बजे ले ट नहुने र २÷३ बजे भे ट नहुने कर्मचारी कति हो कति छन् ।
बाटो मिचे र घरको पर्खाल लगाउने , सडकको माटो खने र घरको आ“गन पुने र् प्रबृत्ति हो  । यो लगभग सबै मा दे खिन्छ । राजनीतिक ने ताहरुमै काम नतिजाका लागि भन्दा प्रचारका लागि गने र् प्रबृत्ति रो किएको छै न । यी र यस् ता कमजो री कति हो कति छन् । गने र् हामीले नै हो  । हाम्रो जनशक्तिको मानसिकता परिवर्तन नगरी हामी कसरी समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौ ं र ? यो मानसिकताको जनशक्तिलाई जस् ताको त्यस् तै लिएर जति ठूलो काम गर्न गयो त्यति ठूलो कमिशन, अभै m ठूलो अराजकता, अभै m धे रै बे थिति मात्रै हात लाग्छ । त्यसो भयो भने ठूला– ठूला काम गर्दा या त हामी असफलताको बाटो मा हुने छौ ं या त कन्सल्टे ण्टको नाममा धे रै पै सा विदे शतिर बग्नेछ । दुबै अवस् थामा दे शलाई फाइदा हु“दै न । यसबारे मा विगतका थुप्रै घटना मध्ये को एउटा घटनाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । जस् तै ः सरकारको पूर्ण स् वामित्वमा भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बै ंक र ने पाल बै ंक बिगाने र् तिनकै कर्मचारी र राजनीतिक ने ता थिए । त्यसलाई सुधार गर्न मो टो रकम खचे र् र विदे शी गुहार्नुप¥यो  । आखिर हामी आपै mले सुधारको प्रयास नगरी बै ंक सुध्रिएनन् ।
यसको अर्थ ठूला यो जना बनाउनुह“ुदै न भन्ने ह“ुदै हो इन । तर हाम्रो सो च, चरित्र, चलन, सामाजिक मान्यता, आर्थिक आचरण, जिम्मे वार बन्नु नपने र् , जवाफदे ही हुनु नपने र् , दण्डहीनता कायम रहने , राम्रो भन्दा हाम्रो खो ज्ने , सरकारी तलव सुविधा खाने हरुका संघसंगठनका हर्ताकर्ताको रजाइ“ यथावत रहने , बे थितिका सम्वाहकहरु नै पुरस् कृत र सम्मानित हुने , लो भी र अल्छीहरु दण्डित नहुने हो भने हाम्रो समृद्धिको यात्रा अधुरो हुने छ । त्यसै ले सो च, चिन्तन, चरित्र, प्रबृत्ति पे mने र् अभियान पहिला चलाउनुपर्छ । यो गर्न सकिन्छ । यसको लागि अहिले सबै भन्दा अनुकूल समय छ । किनभने यो अभियानको शुरुवात शासनसत्ताको माथिल्लो निकायबाट शुरु गर्नुपर्छ । दे शको कार्यकारी प्रमुखमा मुलुक बनाउने तीब्र इच्छा हुनुपर्छ । नाम कमाउन, दाम कमाउन प्रमुख पदहरु ताक्ने र मो लमो लाई गरे र पदमा पुग्ने हरुबाट यो काम हु“दै न । अहिले दे शको कार्यकारी प्रमुखमा के पी ओ ली हुनुहुन्छ र उहा“ निस् वार्थ दे श बनाउन लागे को व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा कसै बाट लुके को छै न । ने ताले दे श बनाउने इच्छा मात्रै राखे र पनि हु“दै न । दे श बुझ्नु पनि पर्छ । सपना दे खे र मात्रै हु“दै न, बाटो पनि दे ख्नुपर्छ । आफ्नो क्षमता, साधनस्रो त, शक्तिको सही पहिचान हुन सक्नुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री यी सबै कुरामा प्रष्ट जानकार मानिस हुन् । यी विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने क्षमता उहा“मा छ । त्यसै ले यो समय एकदमै अनुकूल समय हो मुलुकको समृद्धिको यात्राका लागि । कुनै पनि मुलुकले हासिल गरे को समृद्धिको इतिहास के लाउ“दा कुनै न कुनै नायक पे mला पर्छन् । ने पाललाई पनि यो यात्राको ने तृत्व लिने नायकको खा“चो थियो र वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले यो जिम्मे वारी पूरा गने र् बलियो सम्भावना दे खिएको छ ।
इतिहासले जिम्मे वारी सुम्पे का नायकले दे श विकासका ठूला सपना दे ख्नुपर्छ । र दे खाउनुपर्छ स“गस“गै आपूmले परिचालन गने र् वा यो अभियानका लागि परिचालित हुने स्रो तसाधन पनि सही सलामत र कर्म गर्नयो ग्य हुनै पर्छ । यो अभियानमा कुनै नया“ अनुहारले मात्रै काम गने र् भन्ने हो इन, भएका पुराना अनुहार नै महत्वपूर्ण हुन् । किनकि काम तिनीहरुबाटै लिनुपर्छ । फरक यत्ति हो तिनीहरुस“ग भएको पुरानो सो च र चरित्रले नया“ तरीकाले कर्म गर्न प्रे रित गदै र् न । पुरानै सो च र पुरानै तरीकाले कर्म गरे र नया नतिजा आउदै न । त्यसै ले पहिला उच्च तहबाटै सो च र शै ली बदल्न प्रे रित गर्नुपर्छ । यो खालको काम अलिकति सकारात्मक उत्प्रे रणाबाट र अलिकति नकारात्मक उत्प्रे रणाबाट गर्नुपने र् हुनसक्छ ।
सबै तहका जनप्रतिनिधिले वा सरकारले भनौ ं पहिला मनै दे खि के ही गने र् संकल्प गर्नुपर्छ । समृद्धिको अभियानमा कुनै एउटा तह वा सीमित मानिस मात्रै सक्रिय भएर र थो रै मानिसले धे रै काम गरे र मात्रै पुग्दै न । यो महान अभियान हो त्यसै ले लगभग सबै मानिसलाई यो अभियानमा सकारात्मक सो च र उत्प्रे रणाका साथ सक्रिय बनाउन पहल गर्नुपर्छ । के ही गर्दा पनि उत्प्रे रित हुन नचाहने , नबदलिने र सधै निहित स् वार्थमा मात्रै लाग्ने मानिसलाई कानुनी हिसाबले नै दण्डित गरे र वा दण्ड हुने त्रास दे खाएर काबुमा ल्याउनुपर्छ ।
शुरुवात यसरी गर्न सकिन्छ । पहिला सरकारले आ–आप्mनो तहबाट गरिने काम र आचरणको खाका बनाउने , लक्ष तो क्ने र सार्वजनिक घो षणा गने र्  । त्यसपछि
आप्mनो मातहतका जिम्मे वार पदाधिकारीलाई आप्mनो जिम्मे वारी के हो ? के गर्न सकिन्छ ? कति अवधिमा गने र् ? किन गने र् ? के गर्नुह“ुदै न ? आदि जस्त विषयमा स् वःघो षणा गर्न लगाउने  । सबै ले गरे को स् वघो षणाप्रति सबै लाई जिम्मे वार हुन लगाउने  । यस् तो स् वमूल्यांकनको आवधिक समीक्षा गने र् र पूरा गरे वा नगरे को अवस् थाको जानकारी लिने र जानकारी दिने  । कसले कति पूरा गरे को छ र नतिजा कस् तो आएको छ त्यसबारे मा सामूहिक समीक्षा गने र्  । आपूmले गरे को स् वघो षणा पूरा भएन भने के कारणले भएन ? कारण उचित थिए वा बहाना मात्र त्यसलाई मूल्यांकन गने र् र सम्झाउने  । स् वघो षणा पनि पूरा नगने र् मानिस यो ग्य हुनै सक्दै न । त्यही हिसाबले मूल्यांकन गने र्  । काम गने र् वातावरण निर्माणमा सहयो ग गने र् , अनुकूल वातावरण बनाइदिने तर आपै mले तो के को जिम्मे वारी पूरा नगने र् छुट कसै लाई नदिने  ।
स् वघो षणा गर्दा ठूला–ठूला बाचा गर्न जरुरी छै न । आप्mनै आचरण, व्यवहार, बानी, दै निकी, स् वभाव, आप्mनो जिम्मे वारी, दै निक कार्य, आप्mनै इमानदारी, समयको पालना, जिम्मे वारी पूरा गर्ने संकल्प, अरुप्रति सम्मान, आप्mनै पे शाप्रति बफादार, सफाइ, मितव्ययिता आदि जस् ता साना मसिना लाग्ने कुरालाई ध्यान दिन सम्झाउने  । कुनै पनि जिम्मे वार पदाधिकारीले म काम गर्दिन“, समयमा कार्यालय आउदिन, समयसम्म कार्यालयमा बस् ि दन“, काम गर्दिन, से वाग्राहीस“ग राम्रो व्यवहार गर्दिन“, कमिशन नलिइकन काम गर्दिन“, घुस खान्छु, मे रो काम समयमा गर्दिन“, नियम कानूनको पालना गर्दिन, श्रो त साधनको दुरुपयो ग गर्छु सदुपयो ग गर्दिन“, हुने कामलाई नहुने भन्दिन“, मे रो जिम्मे वारी पूरा गर्दिन“ आदि जस् ता कुरा कसै ले भन्दै न र ले ख्दै नन् । अहिले कुनै पनि जिम्मे वार पदाधिकारीले यो भन्दा बढ्ता बाचा गर्नुपदै र् न । यो भन्दा बढ्ता काम गर्नुपदै र् न । माथि भने का साधारण लाग्ने , गनै र् पने र् तर नगरिएका, गर्न छाडिएका काम गने र् हो भने आपूmले तो के को अर्थात राज्यले तो के को लक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ । साना–साना कामलाई हरे क दिन, हरे क छिन पूरा गर्र्र्र्दै जाने हो भने दे शले लिएका ठूला–ठूला लक्ष आपै m पूरा हुने बाटो मा लाग्छन् ।
यति काम र कामको नियमित मूल्यांकन गने र् परिपाटी बसाउने हो भने कामको नतिजाले फड्को मार्न थाल्छ । काम गने र् हरुसग आत्मविश्वासको अनुकूल वातावरण बन्छ । कामचो र अल्छीहरु या त बदलिने छन् या त सजायको भागिदार बन्ने छन् । समग्र हाम्रो राज्य संयन्त्रको समस् या धे रै ठूलो छै न । यो समाधान गनै र् नसक्ने समस् या हो इन । अलिकति प्रयास गर्दा हामी आपै mले बिगारे को चलन आपै m लागे र बनाउन सक्छौ ं । मै ले बुभे mको समस् या भने को भनाइ र गराइको फरक मात्र हो  । यसलाई भनाइ अनुसारको गराइमा ल्याउने गरी पाइला चाल्ने हो भने समस् या समाधान र सामथ्र्यको पहिचान हुन थाल्छ । यो समृद्धिको यात्रा थाल्न अचुक उपाय हुन सक्छ । जस्तै हामी किन तो के को काम तो के को समयमा गर्दै नौ ं ? यति मात्रै गर्न तयार हुने हो भने धे रै कुरा सुध्रिन्छ । आपूmले गने र् काम र गने र् समय तो क्न लगाउने र पूरा गर्न लगाउने  । यति काम ने तृत्व तहले गराउने हो भने हामी अहिले को हकमा धे रै गने र् मा पछौ र् ं । जब हामीमा काम गने र् , अर्थात बो ले को कुरा पूरा गने र् र नगर्दा आपै m जवाफदे ही बन्ने अवस् था सिर्जना हुन्छ तब हामी अरु ठूला–ठूला काम गर्न सक्छौ ं । दे शले समृद्धिको यात्रा सही माने मा गर्न सक्ने छ ।
Previous: सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर
Next: भर्ना अभियान नपुगेको बादी वस्ती